इस्कुसको तरकारी खानुको यति धेरै अचम्मैको फाइदाहरु ।
स्वास्थ्य : नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपा’च्य र स्व’स्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ ।
त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भ’ण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वा’स्थ्यका लागि कम्ता पो’षिलो छैन । तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ ।
आफुसँग पाककला भए, अनेकथरी परिकार बनाउन सकिन्छ । स्कुस निकै गुणी तरकारी हो । मानव स्वा’स्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी खानेकुरा हो । स्कुस लौका प्रजातिको एक प्रकारको तरकारी हो । यसको उ’ब्जनीको व्याख्या गर्ने हो भने यो विशेषतः मेक्सिको र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट उत्पत्ति भएको तरकारी हो ।
यसको उत्पादन अहिले त विश्वभरि नै फैलिएको छ । ए’न्टिअ’क्सिडेन्ट र विभिन्न पो’षक तत्वहरूसहितको यो तरकारी स्वा’स्थ्यको लागि अत्यधिक ला’भ प्रदान गर्ने तरकारी हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
स्कुसका तल उल्लेखित फाइदाहरू छन्
१. पो’षक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भि’टामिन, ख’निज, र फा’इबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ ।
क्यालोरी – ३९ कार्बाे’हाइड्रेड – ९ ग्रा’म प्रो’टिन – २ ग्राम भि’टामिन सी –२६ प्रतिशत क’पर – १२ प्रतिशत पोटा’सियम – ७ प्रतिशत म्याग्ने’सियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ । यस्तो खाले पोषक तत्वका साथसाथै स्कुसमा कम क्या’लोरी, फ्याट, सोडि’यम र का’र्बाेहाइड्रेड हुने गर्छ । त्यस्तै, श’रीरलाई स्व’स्थ बनाउनको लागि यो सहायक सिद्ध हुन्छ ।
२. एन्टिअ’क्सिडन्टको उपलब्धता स्कुसका धेरै फाइदाहरू छन् । यसलाई श’रीरमा चाहिने एन्टिअ’क्सिडेन्टको प्रचु’रताका कारण पनि अति’गुनिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ । एन्टिअ’क्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदा’र्थहरूमा पाइन्छ, जसले हाम्रो श’रीरको तन्तुहरूमा हुने अस’रबाट बचाउँछ भने यसले श’रीरभित्र हुन सक्ने तना’वलाई पनि कम गर्ने गर्छ ।
यिनीहरूमध्ये स्कुसमा माइ’रिसेटिन सबैभन्दा अधिक मात्रामा पाइन्छ । विभिन्न अनुसन्धान अनुसार मा’इरिसेटिन क्या’न्सरप्रति’रोधी छ साथै यसले म’धुमेह र ज’लन पनि कम गर्छ । स्कु’स भि’टामिन सीको एउटा उत्कृष्ट स्रोत हो, जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।
३. मु’टुको स्वा’स्थ्यका लागि स्कुस धेरै खाने मान्छेमा मु’टुरो’गको जो’खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च र’क्तचाप, उच्च को’लेस्ट्रोल र र’क्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ । ज’नावर र टेस्ट’ट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले र’क्तनलीहरूलाई स्व’स्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ ।
यसले र’क्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं र’क्तचाप घ’टाउन मद्धत गर्छ । यसबाहेक स्कु’स फा’इबरको राम्रो स्रोत हो । २०० ग्राम स्कु’समा शरीरमा चाहिने कुल फा’इबरको १५ प्रतिशत आरडीआई प्राप्त गर्न सकिने बताइन्छ । फाइबर युक्त खाद्य पदार्थको उच्च सेवनले मु’टु रो’गको जोखिम घ’टाएको छ ।
४. र’गतमा हुने गुलियो प’दार्थको नियन्त्रणमा सहयोगी घु’लनशील फा’इबरले शरीरको पाचन प्रणाली र कार्बाे’हाइड्रेडको अव’शोषणलाई सुस्त बनाउँछ, जसले र’गतमा चिनीको मात्रामा कमी ल्याउँछ । स्कुसले इ’न्सुलिनलाई प्रभावित गरेर र’गत हुने चिनीको मात्रा नि’यन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
५. स्व’स्थ ग’र्भावस्थालाई सहयोग गर्ने स्कुसको नियमित से’वनले स्व’स्थ ग’र्भावस्थालाई सहयोग गर्न मद्धत गर्छ । फो’लेट वा भि’टामिन बी सबै व्यक्तिको लागि आवश्यक छ । तर ग’र्भवती वा ग’र्भाधान संस्कारको तयारीमा रहेकाहरूको लागि यो झनै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले यस्ता मान्छेको लागि पनि स्कुसको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ ।
प्रारम्भिक ग’र्भावस्थामा, भ्रु’णबाट म’स्तिष्क र मे’रुदण्डको उचित विकासका लागि फो’लेट आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त फो’लेट सेवनले बच्चाको म’स्तिष्क विकास र सकुशल जन्ममा समेत मद्धत गर्छ । २०० ग्रामको एउटा स्कुसले श’रीरमा चाहिने फोलेट र भिटामिन बीको ५० प्रतिशत माग पूरा गर्ने गर्र्छ । यसैले, सन्तुलित आहारको एक भागको रूपमा स्कुस खानु स्वस्थ ग’र्भावस्थाको लागि उत्तम हुन्छ ।
६ क्या’न्सर कम गर्न सहयोग उच्च पो’षणयुक्त फलफूल र तरकारीको उपभोगले विभिन्न प्रकारका क्या’न्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउने गर्छ । एक अध्ययनले निश्चित मात्रामा स्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौगिकहरूले क्या’न्सर हुन सक्ने कोषिकामा त्यसको असर कम गर्ने गरेको देखाएको छ । यद्यपि यी नतिजाहरू पूर्ण क्या’न्सर प्रतिरो’धी भनेर प्रमा’णित तथ्य भने होइनन् । तर यसले क्या’न्सर कमगर्न सहयोग गर्छ भन्ने विषय भने विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित विषय हो । यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।
७. बुढेसकालमा हुने दृ’ष्टिदोष कम गर्न फ्रि रेडिकल भन्ने एउटा मुख्य सिद्धान्त हुन्छ । जसले श’रीरका विभिन्न कोषहरूमा क्षति पुर्याएर उमेर ढल्किँदै गएपछि हुने दृ’ष्टिदोष कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउछ । यसैले, भि’टामिन सी पर्याप्त पाइने यो तरकारीको नियमित सेवनले बुढेसका’लको दृश्य कम गर्न मद्दत गर्छ ।
८ मि’र्गाैलाको कामलाई सहज बनाउन फ्याटी लि’भर डि’जिज भनेको एउटा यस्तो स’मस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बो’सोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा क’लेजोमा बो’सो जम्ने कामलाई यसले नि’यन्त्रण गर्न सक्छ ।
मु’सामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवाएको मुसामा को’लेस्ट्रोल र फ्या’ट्टी ए’सिडको मात्रा कम पाइएको थियो ।
तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको क’लेजो स्वा’स्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
९ स्व’स्थ रूपमा व’जन बढाउन विभिन्न अध्ययनहरूले
स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मो’टोपनाको कुनै स’मस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ ।
पछि तौ’ल घ’टाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घ’टाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ । १०. पा’चन स्वा’स्थ्यलाई सहयोग पुर्याउछ तपाईंको पा’चन प्रणा’लीमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहायक सिद्ध खानेकुरा हो ।
२०७८ जेष्ठ २१, शुक्रबार १७:५४ गते0Minutes 809 Views
मन्त्री आले भन्नुहुन्छ : नेताहरूकाे चरित्र असल भएकाे भए देशकाे हालत यस्ताे हुँदैनथ्याे ।
जाडोमा बदाम खानुका ५ अचम्मैको फाइदाहरु जान्नुहोस् ।
दिनहु काक्रा खानुको १२ अचम्मैको फाइदाहरु ।